टाइगर हिलको सूर्य र मेरो करेसो | मझेरी डट कम
अनि अस्ति फेरि त्यस दृश्यलाई हेर्ने सुरले पुगें । के के न होला भनेको थिएँ । त्यो दृश्य हेरेका मान्छेहरूबाट अचम्मका कुरा सुनेको थिएँँ, पढेको थिएँ । यसबाजि भने सिससिमे पानी उति परेन । साधारण कुहिरो बाहेक घाम झुल्केको मजाले देखियो । मेरा आँखामा दृश्य राम्ररी पर्न पुग्यो । मलाई रमाइलो लाग्नुको साटो अलिक कस्तो कस्तो भयो । मेरा घरको छिंडीबाट अस्ताएको र उदाएको घामको दृश्यभन्दा बढी मलाई यो दृश्यमा किमार्थ पनि नयाँ र नौलो लागेन । मान्छेले आफ्ना छेउको र घरआँगनको दृश्यलाई महत्व नदिएर कताकता सपनाको दृश्यलाई महत्व दिएको अनुभव बटुलेंं । मलाई लाग्यो मेरै घर आगँन र आगेजुङ वा पौवा डाँडा वा पाल्पाको श्रीनगरको थुम्कोबाट देखिने घामको झुल्केको दृश्य योभन्दा महत्वको हुन्छ । अनि लाग्यो के पनि भने कहिल्यै झुल्केको घाम नदेखिने ठाउँका लागि मात्र यसको महत्व हुन्छ । मेरा लागि यो कुनै नौलो कुरा भएन । अनि अरु थोक पनि धेरै लाग्यो भन्नु हुने पनि लाग्यो भन्नु नहुने पनि लाग्यो । अनि म फनक्क फर्किएँ । सम्भवतः सधैं सिरेटो, चिसो र स्याँठ चलिरहने ठाउँका बासिन्दाका लागि यो दृश्यले महत्व लिएको हुनुपर्छ । घाम कहिले लाग्ला भनेर पर्खनेहरूका लागि यसको महत्व रहेको हुनुपर्छ । सोचें । मलाई भने त्यस दृश्यले कागका लागि बेल पाकेको जति पनि भएन । उल्टै त्यहाँ घामको एक झुल्को देखिना साथ पहिलो पटक पानी पर्न थालेको थियो । मलाई त बरु त्यसले पो एकोहोर्याएको थियो । झुल्केको घामलेभन्दा वा अस्ताएका घामलेभन्दा बरु घामसँग पानी परेका दृश्यले पो मलाई एकोहोर्याउँछ ।
घिमिरेले घामपानीको दृश्यलाई अघि राखेर वा विषय बनाएर कवितामा एउटा रमाइलो आनन्दको अनुभव पनि पोखेका छन् । घाम र पानीका साथ सुखदुःखको अनुभूति झल्काएका छन् । मलाई पनि घामपानीको बेलामा त्यसै त्यसै कताकताबाट अनेक थरिका भावनाहरू खनिने गर्छन् । अनि त्यसैत्यसै कसरी कसरी आकासमा कुइरो हराएझैं हराएर बिलाउँछन् । उहिले कुन बेलामा र अहिले कुन यामविशेषमा घाम पानी पर्दछ त्यो कुराको मलाई फुम नभए पनि बालख कालमा घामापनीको दृश्यबाट म र मेरा दौंतरीहरू आनन्दित हुन्थ्यौं । उतिबेलाको जस्तो नभए पनि आजभोलि पनि घामपानी र त्यसका साथ इन्द्र्रेनीको दृश्य देखियो कि मेरो मन यसै यसै आनन्दित हुन्छ । त्यसैतिर हेरेर आनन्दित हुन मन लाग्छ । एकोहोरिएर गुनगुनाउन मन लाग्छ । पहिलो पालिको त्यो दृश्यले त्यहाँ उपस्थित मबाहेकका मान्छेहरू पनि निकै आनन्दित भएको कुरा मैले थाहा पाएँ । पछिल्लो पटकको रातो घाम झुल्केको दृश्यलेभन्दा बरु त्यही पहिलो घामपानीका साथ घाम झुल्केको दृश्यले पो मलाई ता आनन्दित तुल्यायो । तर त्यही दृश्यका लागि मैले यतिका टाढा आउनु पर्थ्यो त ? झुल्केको घामको दृश्य हेर्न मैले कसैको मुलुकमा गएर सास्ती बेहोर्नु पर्थ्याे त ? खर्च हाल्नु पर्थ्याे त ? गाडीका कन्डक्टरको तानातानी, तँछाड मछाड, घम्साघम्सी र यता र उताको बिरालाले खेलाएको मुसो जस्तो हुनु पर्ने थियो त ? वास्तवमा यही दृश्यका लागि भने मैले यति विधि सास्ती बेहोर्नु नै पर्दैन थियो । यस्ता दृश्य ता मेरा बारीका पाटाबाट, मेरा मेलापातबाट, मेरा घाँस काट्ने भिरपहराबाट वा मेरा तराईका घुरहू, तयफवाहरूका फुसका झुप्राबाट अथवा मेरा छिमेकी गेल ठेल र फुस्सा राजबंसीहरूका फुसका घरबाट र उसको करेसाबाट पनि देखिन सक्छ ।
उतिबेला मलाई घामपानीको महत्व र त्यसको जीवनसँग कस्तो नाता र योग छ भन्ने कुराको बोध कसरी होस् ! यस्ता कुराहरू त्यस बाल्यकालमा कसरी थाहा हुनन् पनि ! बालककालमा बेला कता घाम, कता पानी कसलाई थाहा होस् । कता घामको झुल्केको दृश्य कता अस्ताउँदाको दृश्य ! कता उदाउँदाको दृश्य ! कसरी थाहा होस् । घाम आफैं झुल्कन्थे, आफैं अस्ताउँथे । कसैले त्यसलाई महत्व दिंदैनथ्यो । बरु उदाउँदा जीवनको धपेडी र आपाधापी शुरु हुन्थ्यो भने अस्ताउँदा विश्रामको क्षण आरम्भ हुन्थ्यो । तर अब थाहा पाउँदै छु, घाम र पानीको जीवनका साथको नाता । त्यो बाल्यकालमा घाम र पानीको नाता जीवनसँग र त्यसको गतिसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउनू । ऊ बेला भने हामीलाई यसले अर्कै आनन्द दिन्थ्यो । टाइगरहिलमा परेको जस्तो घामपानी उहिल्यैदेखि देखिएको हो । पहिलो यात्राको बेला टाइगरहिलको सिमसिमे पानीका साथ यदि म बालखै भएको त्यस बेला पनि घामपानीका बेलामा गाइने बालगित गाएर नाच्ने थिएँ यो गीत गाएर–
घामपानी घामपानी श्यालको बिहे
बिरालाले पकाएको सबैले बाँडीचुडी खाऊन्
यस्ता दृश्यहरूबाट हामी उबेला नाच्थ्यौं । यसको अर्थ के थियो न मलाई थाहा हुन्थ्यो न मेरा दौंतरीलाई । तर पनि घामपानी पर्नासाथ हामी उक्त गीत गाउँदै रमाउथ्यौं, नाच्थ्यौं, पानी छ्यापाछ्याप गर्दथ्यौंं । हिलो छ्यापाछ्याप गर्दथ्यौं । घाम पानी परेको बेला भयो कि अहिले पनि मलाई त्यही दृश्य र त्यस दृश्यका साथ नाचेको गाएको र हिलो पानी छ्यापाछ्याप गरेको सम्झना मगजभरि घुमिरहन्छ । कति आनन्दका क्षणहरू हुन्थे त्यो बाल्यकालमा ! कति रमाइलो हुन्थ्यो त्यो जीवनका आरम्भका घडीमा ! कति सुखानुभूतिहरू आउँथे त्यस बेला ! आज पनि घाम पानी भयो कि श्यालको बिहेको गीत आउँछ । कि उनै उनै साथीसँगीहरू आज पनि मस्तिष्कभरि सग्बगाउँछन्, अथवा उही वातावरण आज पनि मनभरि छताछुल्ल हुन्छ । पानी पर्दा माटोबाट आउने सुवास आज पनि मग्मगाउँछ, उनै परिस्थितिहरू रग्मगिन्छन् । उही सिरसिरे हावा र उही माटोको गन्ध नाकभरि रुग्रुगाउँछ ।
आज सम्झन्छु, घाम र पानीको त्यो अवस्था र त्यो दृश्य मेरा जीवनमा सुखद र आनन्दको क्षण थियो । घाम र पानी त आज पनि उसै गरी लागेकै हुन्छ र सप्तरङ्गी इन्द्रेनी पनि उसै गरी घामपानीसँग लागेकै देखिन्छ । तर किन मलाई आज उबेलाको जस्तो नभई अर्कै अनुभूति हुन्छ यो घामपानीका साथ ? मलाई आज घाम पानीसँग त्यही रमाइलोको अनुभूति किन हराएको छ ? बालख भएको भए सम्भवतः म नाच्ने थिएँ टाइगरहिलको घामपानीको दृश्य देखेर । तर आज नाच्न मिलेन । बयस्क भइसकें । अद्र्धवृद्ध भइसकेें । आज घाम र पानीहरूसँग जिन्दगीका तितापिरा कुरासँग जोडिन्छन् र मलाई जोड्न पनि मन लाग्छ । घाम भनेको ताप हो दुःख र पीडा हो अनि पानी भनेको शीलतलता हो, रमणियता हो जीवनको सुन्दरता हो भन्ने भाव मलाई भित्रबाटै आउँछन् । यसो नै हो त ? प्रश्न आफैं उब्जनसक्छन् । पानी नपर्दा मलाई विरक्त लाग्छ र अधिक पानी परे पनि मलाई कम दुःख लाग्दैन । सबैतिर हिलै हिलो, कादो र फोहोर । अनि उता कडा घाम लाग्यो भने पनि म भुतुक्क हुन्छु, हप्याकहप्याक भइन्छ । कता चिसो पानी, कोकाकोला, फ्यान्टा चिसो अािदको तुलबुल । अनि कम घाम लाग्दा पनि मलाई उही अप्ठेरो— जिउ नै ओइलाएको जस्तो लाग्ने । अति वृष्टि भयो भने पनि उनै समस्या । जाडोबाट पनि मलाई समस्या गर्मीबाट पनि मलाई समस्या । के मेरा लागि घामले मलाई चाहिएजति मात्र लागिदिनु पर्ने भयो त ? के मेरै लागि पानीले पनि मलाई चािहने जति मात्र परिदिनु पर्ने भयो त ? मलाई नै चिमोट्तै म नै प्रश्न गर्छु । आज मलाई किन अरु नै भावहरू खनिन्छन् ? खै किन हो म आफैं जान्न छाडेको छु ।
सुख र दुःखहरूलाई घाम र पानीसँग जोडिनुको के औचित्य ? घिमिरेले किन घाम पानीलाई जीवनका साथ जोडे ? सोचिरहन्छु । आज पनि पानी त उही पर्छ, उसै गरी दर्किन्छ, घाम पनि उसै गरी लाग्छन्. टन्टलापुर अनि अस्ताउँछन्, फेरि झुल्कन्छन् । याम अनुसारका घाम लाग्छन् । याम अनुसारको पानी पर्छ । याम अनुसार बादल लाग्छ, तुसारो पर्छ, बादल लाग्छ, हुस्सु लाग्छ । तर जब हुस्सु लाग्छ, अनि मेरो मनभरि पनि हुस्सुले ढाकेको जस्तो गरी कुनै प्रकारका कुराहरू बग्न छाड्छन् । मेरो मन यसै विरक्तिन्छ । मनमा स्याँठ परेको अनुभव हुन्छ । किन यस्तो कुरा हुन्छ ? किन यस्तो हुन्छ ? के घाम पानी, हुरी बतास, हुस्सु स्याँठ आदिका साथ मानवीय भावनाहरू गाँसिएका हुन्छन् ? के मान्छेका सुख दुुःखको अवस्थाका साथ घाम र पानीका माझमा कुनै सम्बन्ध रहेको हुन्छ ? मलाई अचम्म लाग्छ । हुस्सुले ढाकेको ठाउँमा जीवन सहजाउँदैन ? घामको तापले डढाएको स्थानमा जीवन बिरसिलो र सुस्क हुन्छ भन्ने जस्ता प्रकृतिका भनाइहरू कति सत्य छन् त ? मलाई सोच्न मन लाग्छ ।
प्रकृतिका लागि घाम पानीको सममेल हुनै पर्ने कुरा पनि कतैकतै कसै कसैले लेखेको देखेको छु, पढेको छु ।
हो त यो कुरा ? मलाई घोरिन मन लाग्छ ।
दार्जिलिङको सधैंको हुस्सु र सिरेटोका माझको मान्छेको जीवन सहजाएकै देखिन्छ, इलामको निरन्तरको कुइरोका माझको दिनचर्या र सिक्किमको उत्तरी भागतिरको चिसो स्याँठका माझमा पनि मानव जीवन उसै गरी चलिरहेको देख्छु । अनि मलाई घाम र पानीको सममेल हुनै पर्ने कुरामा कुनै तुक रहेको छ जस्तो लाग्दैन । घामैघाम र पानी नै पानीमा पनि मान्छेले जीवन काटेकै छ । बारै मास समुद्रमा जीवन बिताउने माझीहरूको जीवनमा उज्यालो आएको छ । मरुभूमिका छेउको जिन्दगीमा जहाँ पानी नै पर्दैन त्यहाँ पनि जीवन चलेको छ । त्यसैले जहाँ घाम कम लाग्छ त्यहाँ घामको अधिक महत्व हुन सक्ला र जहाँ कम पानी पर्छ त्यहाँ पानीको महत्व हुन सक्ला । समान गतिमा घाम लाग्ने र पानी पर्ने ठाउँमा मात्र घामपानी भनेको दुःखसुखको प्रतिक हुन सक्ला । घामै नलाग्ने ठाउँमा घाम नै जीवन मानिन सक्ला पानी नै नपाइने ठाउँमा पानीलाई नै जीवन मानिन सक्ला । मेरा करेसामा सधैं घाम लाग्छ, यहाँबाट टाइगर हिलको जस्तो दृश्य दिनको दुईदुई पटक देखिन्छ, यहाँ पानीको पनि कुनै हाहाकार छैन, यसैले यहाँ पानी र घामबाट कुनै पीडा छैन । तिनका प्राप्तिमा हर्ष र तिनको अभावमा दुःख पनि छैन । यसैले यहाँ घाम न दुःखको प्रतिक हो न पानी नै सुखको प्रतिक हो ।
मान्नेहरूले त फूललाई जीवन र फूलैसँगको काँढालाई कष्टको प्रतिक पनि त मानेका छन् नि !
दुई हाइकु (आकाश कालो)